पत्रिकामा खानेकुरा नबेर्नुस्, क्यान्सर लाग्ला ! – दाङ खबर
पत्रिकामा खानेकुरा नबेर्नुस्, क्यान्सर लाग्ला !
एजेन्सी – बाटोमा उभिएर चनाचटपटे खान त मजा लाग्ला तपाईंलाई । पत्रिकाको चुच्चे भाँडो बनाएर चटपट खाने गर्नुभएको होला । अनि कहिलेकाहीँ अल्मुनियम फोइल वा प्लास्टिक नभेटेर पत्रिकामै रोटी बेर्ने गर्नुभएको होला ।
यसो गर्नु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हानिकारक छ । पत्रिकामा प्रयोग हुने मसीमा स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने बायोएक्टिभ तत्व हुन्छन् । यसरी पत्रिकामा टाँसिएको खानेकुरा खाँदा क्यान्सर पनि हुन सक्छ ।मसीमा हानिकारक रंग र त्यसको रसायनमा माइक्रो अर्गानिजम हुन्छ जसले स्वास्थ्य बिगार्छ ।
रिसाइकल गर्न मिल्ने कागज र कार्डबक्स पनि खतरनाक नै हुन्छन् । यिनमा फ्थालेट नामक विषालु रसायन हुन्छन् जसले पाचन प्रणालीलाई बिगार्छन् । यिनीहरूले बूढा र बच्चालाई क्यान्सर समेत गराउँछन् ।खानेकुरा कहिलेपनि पत्रिकामा बेरेर राख्नु हुँदैन ।
Prevअस्पतालमा दक्ष जनशक्ति र उपकरण अभावमा बिरामीलाई कष्ट
Nextकानूनमन्त्री भण्डारी भन्छन् लागु औषध मानव समाजको क्यान्सर
‘घरभित्रको धुँवामुक्त अभियान’ गतिहीन, २७ हजार परिवार सुधारिएको चुलोबाट वञ्चित